အမေရိကန်လေတပ်၏ F-117 ကိုယ်ပျောက် ဗုံးကြဲလေယာဉ် – Burmese.asia
Homepage / News / အမေရိကန်လေတပ်၏ F-117 ကိုယ်ပျောက် ဗုံးကြဲလေယာဉ်
ထို ဗုံးကြဲလေယာဉ်ကို ကျွန်တော် ငယ်စဉ်ကတည်းက သိခဲ့ပါတယ်။ အခု စစ်လက်နက် လေ့လာတဲ့ဘက်ရောက်မှ ထိုလေယာဉ်ကို F-117 ဟု သိခဲ့ရပ်တယ်။ ထို ဗုံးကြဲလေယာဉ်ဟာ lockheed Corporation ၏ ပထမဆုံးကိုယ်ပျောက်နည်းပညာကိုအသုံးပြုတည်ဆောက်ထားသော လူတစ်ဦးလိုက်ပါမောင်းနှင်ထိန်းချုပ်ရသည့် လေယာဉ်ဖြစ်ပြီး 18.6.1981 မှာ ပထမဆုံးအကြိမ်စမ်းသပ်ပျံသန်းခဲ့ပါတယ်။
1983 တွင် အမေရိကန်လေတပ်၌ စတင်အမှုထမ်းခဲ့ပြီး စုစုပေါင်း 64 စီးအထိ တည်ဆောက်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ထို F-117 မှာ Area 51 က ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်ဟုလည်းဆိုကြပါတယ်။ထို လေယာဉ် ကို ၏ ဒီဇိုင်းဟာ ရေဒါပုံရိပ်ဖမ်းယူနိုင်စွမ်းကို အတတ်နိုင်ဆုံး လျှော့ချထားခဲ့ပြီး ရန်သူ့၏ မြေပြင်အခြေစိုက်စစ်စခန်းများကို အလစ်ငိုက်တိုက်ခိုက်နိုင်ရန် သီးသန့်ထုတ်လုပ်ထားသော တိုက်လေယာဉ်အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။
ထိုဗုံးကြဲလေယာဉ်တွင် 1. F-117A / 2. F-117B နှင့် 3. F-117N ဟူ၍ မျိုးကွဲ3မျိုး ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထို မျိုးကွဲများအနက် F-117B ကို အမေရိကန်နဲ့ ဗြိတိန်လေတပ်အတွက် ထုတ်လုပ်ရန်ရည်ရွယ်ခဲ့သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် ဗြိတိန်မှ ငြင်းဆန်ခဲ့တာကြောင့် ထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။
F-117N မှာ‌ လေယာဉ်တင်သင်္ဘောများအတွက် ရည်ရွယ်ထားခဲ့သောမျိုးကွဲဖြစ်ပြီး F-117 A တွင် အနောက်ယပ်2ခုထပ်မံတပ်ဆင်ပြီး မူလ F-117A ထက် လက်နက်တွေပိုမိုတင်ဆောင်နိုင်ရန် နှင့် Air to Air missile များ တပ်ဆင်နိုင်ရန် လျာထားခဲ့သော်လည်း ထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။
ထိုကြောက့် အောင်မြင်စွာထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့‌ သော F-117A အကြောင်းကိုသာ ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကဲဒါဆိုရင် ထိုဗုံးကြဲလေယာဉ်၏အရွယ်အစားကိုအရင်ပြောပါရစေ။
ထို F-117 ဟာ အလျား – 20.09 မီတာ ၊ အနံ – 13.21 မီတာ နှင့် အမြင့် – 3.78 မီတာရှိပါတယ်။ မည်သည့်လက်နက်မှမတပ်ဆင်ထားပါက 29500 ပေါင်လေးပြီး အလေးဆုံးအလေးချိန်က ပေါင် 52500 ပေါင်ရှိပါတယ်။ ထို‌ဗုံးကြဲလေယာဉ်တွင် General Electric ထုတ် F-404 Turbofan engine (2) လုံးကိုတပ်တင်ထားပြီး တစ်နာရီကို 1100 kilometers နှုန်းဖြင့် 1720 kilometers အထိစစ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ ဝေဟင်ဆီဖြည့်စနစ်ပါတာကြောင့် အကွာအဝေးပိုသွားနိုင်ပါတယ်။ထို ဗုံးကြံလေယာဉ်တွင်‌ နေ့ဘက်၊ညဘက်အချိန်တွင် ရေပြင်၊မြေပြင် နှင့်ဝေဟင်ထောက်လှမ်းနိုင်သည့် အဆင့်မြင့်အာရုံခံစနစ်များ ပါရှိတာကြောင့် နေ့ညမရွေးတိုက်ပွဲဝင်နိုင်သော တိုက်လေယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ထို ဗုံးကြဲလေယာဉ်၏ ဗိုက်အောက်တွင် လက်နက်သိုလှောင်ခန်း2ခန်းပါရှိပြီး 1 ခန်းစီတွင် လက်နက်ချိတ်ဆွဲရန် နေရာ 1 ခုပါရှိပါတယ်။ စုစုပေါင်း 2ခုပေါ့ဗျ။
ထိုလက်နက်ချိတ်ဆွဲရန်နေရာတွင် 1. 2000 ပေါင်လေးပြီးလေဆာလမ်းညွှန်စနစ်ပါသည့် GBU-10 Paveway2bomb များ 2. 510 ပေါင်လေးသည့် လေဆာလမ်းညွှန် GBU-12 Paveway2bomb များ 3. 2000 ပေါင်လေးသည့် လေဆာလမ်းညွှန် GBU-27 Paveway3bomb များ 4. GBU-31 bomb များ နှင့် 5. B-61 Nuclear Bomb များကို တပ်ဆင်၍ စစ်ဆင်နိုင်တာကြောင့် အလွန်အန္တာရာယ်ကြီးသည့် လက်နက်အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။
ထိုတိုက်လေယာဉ်တစ်စီးကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ 111.2 million တန်ကြေးရှိပါတယ်။ မည်သည့်နိုင်ငံ‌ကြိမှ ရောင်းချခြင်းမပြုခဲ့ပါ။ ယခုအချိန်မှာ ထိုဗုံးကြဲလေယာဉ်တွေဟာ အမေရိကန်လေတပ်မှအနားယူသွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းတို့နေရာမှာ F-22 raptor နှင့် F-35 lighting2တို့အစားထိုးဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့ အမေရိကန်၏ကိုယ်ပျောက်ဗုံးကြဲလေယာဉ် F-117 အကြောင်းကို ကျွန်တော်တို့လက်လှမ်းမှီသရွှေ့တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
Previous post တရုတ်ကို သတိပေးဖို့ အမေရိကန်နဲ့ ဂျပန် စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်မည်
Next post ဝူဟန်မြို့ကြီးပြန်စည်ကားနေချိန် ကိုဗစ်ကြောင့် နာဖျားနေသောကမ္ဘာကြီး